Miaraha mifaly amin’izay faly, ary mihara ory amin’izay ory | 102 KARA
Miaraha mifaly amin’izay faly, ary mihara ory amin’izay ory
Fantatry ny Malagasy rehetra izany fehezan-teny izany, kanefa firy no tena mampihatra
Ny zava-misy dia ny fanaovana vain-drahalahy tsy maharary na ny hoe : raha maty aho matesa rahavana, fa raha maty rahavana matesa ny kisoa.
Rijan-teny ilazana ny TSY FIRAHARAHANA ny sasany ny mpiara-belona aminy izany.
Dia hoy ny maro hoe : ilaina ve Ny FANDANIM-BOLA hampisakafoana sokajy sy sarangan’olona an’arivony, nefa ny vahoaka an-tapitrisany tsy misy arapaka ?
Tamin’iny fanasana teny amin’ny Lapam-panjakana teny IAVOLOHA iny tokoa mantsy, dia tsy miafina amin’ireo nasaina fa mitofezaka ny vahoaka. Raha nilaza ny tsy FANDEHAN-DRAHARAHA eto amin’ny Firenena ny Filoha sy ny praiminisitra dia nanambara fa FANANGANANA sy FANARENANA ary FANAMARINAN-TOERANA ara-politika ihany IZAY ROA TAONA nitondrany izay. Koa izao vao tena hiroso amin’ny fampandrosoana.
Mahakely finoana ihany anefa izany, satria dia mbola FANDANIANA tsy hipaka any amin’ny vahoaka ho hatao amin’ity taona ity, fa ny fikarakarana ny fivorian’ny COMESA sy ny vondron’ny tany miteny sy mampiasa ny teny FRANTSAY.
Ary dia nidehaka mafy ny Filoam-pirenena nilaza, fa ny an-tsasa-manila ny Firenena eto amin’izao tontolo izao no hanatrika izany. Inona anefa no fiantraikan’izany ay amin’ny vahoaka ? Izay indrindra no nitarika ireo olona maro hampidera LOVIA tsy misy na inona na inona, hanehoana fa tsy aleo ve manome ny vahoaka na dia indraim-bava monja aza toy izay hanao FIHETSIKETSEHANA ary FISEHOANA IVELANY toy ny MANESO sy MANDATSA fotsiny ny tsy manan-kohanina ?
Ny sojaben’ny MASOIVOHOM-PIRENENA vahiny dia nilaza ihany koa fa akaikin’i Madagasikara any amin’ny Firenena ivelany ny tsy FIETEZANA sy tsy FANDEHANAN-DRAHARAHA eto amintsika.
Manoloana izany rehera izany anefa dia nilaza ny praiminisitra fa AFAKA TANTERAHINA NY NOFY ary efa eo am-perin’asa amin’izany ny Fitondram-panjakana.
Dia hoy ny maro hoe : » Inona indray izany no nofy manaraka » ? Nofy atoandro sa nofy ririnina, sa revin-gadra hoy ny tenin-jatovo ?
Fa voatsikaritra ihany koa tamin’iny fanasana teny IAVOLOHA iny fa narantiranty ny loko manga teo amin’ny fitafian’ireo lahy sy vavy : lokon’ny mpikambana ao amin’ny antokom-panjakana H V M ary dia hatramin’ny kiraro sy ny poketran’ny vehivavy mihintsy. Raha ampifandraisina amin’ny zava-misy ety ivelany, sy ny fahantran’ny vahoaka anefa izany dia toy ny : » MIHAINGO AMBONIN’NY TSIKOKO IHANY….
102kara liked this post
9 janvier 2016 - 16 h 01 min Social 902 vues